Momba an'i BALLYA
Fiarovana amin'ny sakafo, ny olana manerantany
BALLYA dia naorina tamin'ny 2007, any Guangzhou. Izahay dia mamolavola sy manadihady, manome fitsapana haingana ho an'ny sisa tavela amin'ny antibiotika amin'ny ronono manta mihoatra ny 11 taona. Amin'izao fotoana izao, mihamaro ny olona mihaino ny fahasalamana sy ny fiarovana ny sakafo. Saingy, ny fanaraha-maso ny olan'ny fiarovana amin'ny loharanom-pamokarana sakafo dia hahomby kokoa amin'ny fisavana ny fiarovana ny sakafo, hampihena ny tsindry amin'ny mpanamboatra sakafo, io no iray amin'ny fomba tsara indrindra hifehezana ny kalitao.
BALLYA's ny vokatra dia be mpampiasa amin'ny zavamaniry ronono, toeram-pambolena sy zavamaniry fanodinana sakafo eran'izao tontolo izao.
Ny fifadian-kanina sy ny marina no tena ifantohana indrindra amin'ny indostria momba ny fiarovana ny sakafo mba hiantohana ireo vokatra sy serivisy avo lenta no mpanohana lehibe indrindra ho an'ny mpanjifa. Any aoriana, BALLYA hitazona hatrany ny "Tsy mpitondra izahay, fa ny mpanentana" ho fanahin'orinasa, manaraka ny fahitana "Manavao", manohy mikatsaka ny fahalavorariana, manome teknolojia vaovao bebe kokoa amin'ity orinasa ity.
Nanomboka tamin'ny laboratoara tsy miankina voalohany izahay, ankehitriny manana ekipa R&D matanjaka sy tompon'andraikitra ary manavao amin'ny alàlan'ny ezaka sy fikirizana tsy tapaka. BALLYA's Ny ekipa R&D dia namorona karazana fitsapana antibiotika isan-karazany hanomezana mpanjifa fampiharana marobe. Araka ny fitakian'ny mpanjifa dia afaka manamboatra vokatra misy fahatsapana samihafa izahay mba hamaly ny fangatahana eo an-toerana. Mamolavola vokatra mifanaraka amin'ny filan'ny mpanjifa samihafa, manatsara ary manome mpanjifa kit sy vahaolana fitiliana sakafo avo lenta sy maharitra ary maharitra.
Hatramin'ny 2007, tsy vitan'ny hoe manome vokatra avo lenta ihany izahay, fa manolo-tena amin'ny fanofanana manokana, manampy ny mpanjifa handinika sy hamaha ny olana; manome vahaolana matihanina. Mihaino hatrany ny tsena izahay, ary manome ny vokatra marina, marin-toerana ary mifaninana. Mamaly haingana foana izahay mandritra ny filan'ny mpanjifa.
Ny ronono dia sakafo mahavelona lehibe ho an'ny olombelona ary sakafo tena ilaina amin'ny fiainana, fa ny fiarovana ny ronono dia nantenain'ny olona hatrany. Karazan-tsakafo voahodina vita amin'ny ronono, izay sarobidy indrindra amin'ny tsenan'ny sakafo. Na izany aza, ny olana amin'ny fiarovana ara-tsakafo dia matetika mitranga, izay mitarika ahiahy bebe kokoa amin'ny fiarovana ny ronono.
BALLYA manana traikefa 11 taona amin'ity indostria ity, mifantoka amin'ny fanomezana ny karazana reagents momba ny ronono ary manome vahaolana haingana momba an'izao tontolo izao. Miaraka amin'ny fivelaran'ny teknolojia amin'ny vanim-potoana vaovao, ny olona dia tsy ferana amin'ny ambaratonga voalohany amin'ny fisainana sy ny haitao. Manomboka mitady vokatra avo lenta ny olona hamantatra ny fiarovana ny ronono. Ao amin'ny toeram-pambolena, tobim-panangonana ronono sy zavamaniry fanodinana, dia afaka mamantatra haingana isika raha toa ka mihoatra ny fenitra ny sisa antibiotika.
Rehefa mihoatra ny isan'ireo firenena voalaza ao ny antibiotika ao anaty ronono, BALLYA's Ny fitsapana ronono dia azo fantarina amin'ny alàlan'ny fandidiana tsotra. Tsy mila fanampiana na fitaovana hafa na fitaovana hafa, 10 minitra fotsiny vao vakiana maso ny valin'ny loko eo amin'ny tsipika fizahana. Izy io dia afaka miasa mivantana ao anaty kamio, tobim-panangonana ronono, mpamatsy sakafo ary na ny mpanjifa aza.
Fiarovana amin'ny sakafo:
Ny fitahirizana voam-bary sy sakafo tsy mety dia hiteraka holatra ao anatin'ny fotoana iray. Raha tsy misy ny fitsaboana sy ny fahitana ny poizina ao anatiny dia hiditra amin'ny vatan'ny mpanjifa ihany izy amin'ny alàlan'ny fihinanana sakafo.
BALLYA's ny famaritana mycotoxin dia azo ampiasaina betsaka amin'ny serealy, voamaina ary sakafo. Afaka mamantatra haingana sy marina raha toa ka mihoatra ny fenitra ny mycotoxin amin'ny serealy, voam-bary na sakafo. Amin'ny alàlan'ny loko mifanohitra aseho dia azo atao haingana ny valiny.
BALLYA dia mbola mavitrika amin'ny sehatry ny bioteknolojia. Ny fandrosoana ara-teknolojia rehetra sy ny fiderana ny mpanjifa rehetra dia ny dian-tongotry ny fitomboantsika. Any aoriana, BALLYA's tanjona ny hanatona tsikelikely ny sehatry ny fiompiana, anaty rano ary ara-pahasalamana, mitondra andrim-panjakana na mpanjifa mila fanampiana miaraka amin'ny fomba fitadiavana mora kokoa hamahana ny olan'ny fiarovana ny sakafo "From Farm To Table".
Vokatra comming vaovao:
Fihetseham-po avo 0.02ppb Fitsapana haingana dia haingana ny Aflatoxin M1
Fihetseham-po avo 0.02ppb Fitsapana haingana Quantitative Chloramphenicol
Ny biraonay, ekipa, seho, laboratoara ary ozinina, sns.
Fampirantiana & Asehoy
Mitsidika an'i BALLYA ny mpividy
AMIN'NY ASA FARM